Project RIP: FPS Nyowani Ichangobva Kuburitswa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchifarira mitambo yemavhidhiyo yemunhu wekutanga kupfura kana FPS (Chekutanga Munhu Shooter) ane protagonists ari maZombies kana asina kufa, zita rekuti Project RIP zvinokufadza. Iyo ichangobva kuburitswa yeGNU / Linux uye ine 10% dhisikaundi pane SteamSaka chimbidza kana uchiifarira, vasati vadhonzera icho chinenge chingangoita € 10.
Mutambo wevhidhiyo wave yakagadzirwa neStorming Tech, uye yakavakwa uchishandisa iyo Unreal Injini injini injini ine Linux rutsigiro. Chokwadi musimudziri anonzwika kujairana newe, nekuti ndiye iye akagadzira zvakare Kutiza Nhaka: Yekare Mipumburu, inonakidza puzzle vhidhiyo mutambo. Kana iwe uchifarira kutevera uyu mumwe mutambo wevhidhiyo, ini ndinokurudzira kuti iwe "utore kufamba" online kune kwayo peji yepamutemo, uye iwe unogona kuwana info kana kunyorera kune yavo yekuzivisa system nekupinda yako email kero kuti vakutumire iwe dzese dzichangoburwa nhau.
Zvine mifananidzo ivo vakawana mhedzisiro yakanaka, iine halo yekukakavara uye chiito chinogara chakavimbiswa muzviitiko zvavo zvisinganzwisisike zvine undead seprotocol. Iwe uchave uinacho zvombo zvakawanda kuti iwe unogona kuvhura paunenge uchifambira mberi kurwisa uipi uhu. Pakutanga hauzove nezviwanikwa zvakawandisa, iwe uchafanirwa kuzviwana zvishoma nezvishoma, izvo zvinokupa rusununguko rukuru gare gare.
Mutambo wevhidhiyo unonakidza kana uchida zombie-themed vekutanga-munhu vapfura. Iyo inodhakwa, uye mutengo wayo unonzwisisika, saka hapana zvakashata zvinoshandiswa kuti irege kubudirira. Nehurombo, kana isu tichifanira kuratidza zvimwe zvakashata, isu tinofanirwa kuratidza kusagadzikana. Asi yeuka kuti iwo musoro wazvino, uye zvigamba zvingangoburitswa munguva pfupi yekugadzirisa zvese zviputi. Muchokwadi, iye anovandudza arikutoronga kuburitsa akati wandei maficha manyowani munguva pfupi, kunyangwe kupfuura kugadzirisa izvi nyaya. Saka zvinotaridzika zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Project RIP: FPS Nyowani Ichangobva Kuburitswa yeLinux